आमा र छोरीको एकसाथ बिहे ! - bampijhyala.com
Home > मनोरञ्जन > आमा र छोरीको एकसाथ बिहे !
२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:२१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, गोरखपुर । भारतको उत्तरप्रदेश राज्यमा आमाछोरीकै बिहे एउटै मण्डपमा एकसाथ भएको छ । मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजनाअन्तर्गत एकै मण्डमा आमाछोरी एकसाथ बेहुली बनेर आ–आफ्नो जीवनसाथीलाई बरमाला पहि-याएका हुन् ।
गोरखपुरको पिपरौली ब्लकमा आयोजित विवाह समारोहमा ५३ वर्षीय बेलादेवीले आफ्नै देवर जगदीशसँग विवाह गरेकी हुन् भने उनकी छोरी इन्दुले राहुल नाम गरेका युवकसँग विवाह गरेकी हुन् । सो समारोहमा ६३ जोडीको विवाह एकसाथ सम्पन्न भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
समारोहमा सबैभन्दा बढी चर्चा भने बेला र जगदीशको विवाहले पाएको थियो । पिपरौली ब्लककै कुरमौल गाउँ निवासी जगदीशका जेठो दाजु हरिहरको निधन करिब २५ वर्ष अघि भएको थियो । पतिको निधनपछि बेलादेवीले दुई छोरा र तीन छोरीको पालनपोषणका लागि निकै संघर्ष गरिन् । उनका दुई छोरा र दुई छोरीको विवाह भइसकेको छ भने कान्छी छोरीको विवाह मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत गराउने तयारी भइरहेको थियो ।
परिवारका सदस्यहरुको उपस्थितिमै उनीहरुले पनि सामूहिक विवाह कार्यक्रममा दाम्पत्य जीवन सुरु गरेका हुन्, जहाँ बेलादेवीकी कान्छी छोरीको पनि विवाह भइरहेको थियो । एजेन्सी
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा मंगलबार शक्तिशाली कार बम विस्फोट, ३ जना आक्रमणकारी र ३ जना सर्वसाधारणको मृत्यु २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:२१
नेपालमा खोप उत्पादन गर्न अनुमति दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:२१
बुद्ध एयरले थप्यो अवदेखि हप्तामा ५ उडान गर्ने २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:२१
सहमति बन्न नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ, शुक्रबारसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:२१
हजुरको आजको दिन, २०७८ साउन २० गते, बुधवार, ४ अगस्ट २०२१ २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:२१